5 AKANYANYA AMAZON MUTENGO TRACKER ZVISHANDISO ZVE2021 - NYORO
5 Akanyanya Amazon Mutengo Tracker Zvishandiso zve2021
Sezvo ini ndichigara ndichitaura muzvinyorwa zvangu zvese, iyo nguva yeiyo shanduko yedigital yakachinja kumeso kwezvose zvatinoita uye nenzira yatinozviita nayo. Isu ikozvino hatitomboendi kuzvitoro zvepamhepo zvakanyanya, kutenga pamhepo zvino ndicho chinhu chenguva. Uye kana zvasvika pakutenga pamhepo, Amazon iri pasina mubvunzo rimwe remazita makuru kunze uko iwe aunogona kuwana kubva ikozvino.
Iyo webhusaiti ine mamirioni ezvigadzirwa izvo vatengesi vanobva kutenderera pasirese vakanyora papuratifomu. Zvekuchengetedza makwikwi ari mupenyu pamwe nekuita kuti vatengi vafarire nguva dzese, iyo webhusaiti kazhinji kazhinji kwete inoramba ichichinja-chinja mitengo yezvigadzirwa futi.
Kune rimwe divi, iyi nzira inova nechokwadi chekuti vatengesi paAmazon vanowana iyo yakawanda inogona kuita purofiti. Kune rimwe divi, zvisinei, zvinoita kuti mamiriro acho anyanye kuomera varidzi vemabhizimusi madiki nevatengi avo vakambobhadhara mutengo wakakwirira wechigadzirwa asi zvino voona kuti chigadzirwa chave kutengeswa nemutengo wakaderera zvikuru.
Kugadzirisa iyi nyaya, kana iwe ukashandisa Amazon kana chero imwe online yekutenga portal - iyo ini ndine chokwadi chekuti iwe unoshandisa - iwe unofanirwa kunyatso isa mutengo wekutarisa pawebhu webhu yekomputa yako.
Izvo zvinoitwa nemutengesi tracker ndeyekuti inocherekedza yekuchinja kwemutengo wechigadzirwa pamwe nekukuzivisa iwe nezve kudonha kwemutengo. Pamusoro peizvozvo, iwe unogona zvakare kugadzirisa nzira yekuenzanisa mitengo yechinhu chimwe chete pamapuratifomu akasiyana. Kune huwandu hwevaya vatengesi vemitengo vanowanikwa kunze uko painternet.
Kunyangwe idzo dziri nhau huru, zvinogona zvakare kuvhiringidza pane imwe nguva. Nenhamba huru yesarudzo, unosarudza sei iyo inokodzera zvaunoda? Ndeupi wavo waunofanira kusarudza? Kana iwe uchitsvaga mhinduro dzemibvunzo iyi, ndapota usatya, shamwari yangu. Wauya kurudyi nzvimbo. Ndiri pano kuzokubatsira nezvazvo chaizvo. Mune ino chinyorwa, ndiri kuenda kuzotaura newe nezve mashanu akanakisa Amazon mutengo tracker maturusi e2021 iwe aunogona kuwana kunze uko pane internet sezvazvino. Ndiri zvakare kukupa iwe ruzivo rwakadzama pane yega yega. Panguva yaunopedza kuverenga chinyorwa ichi, iwe haufanire kuziva chero chinhu nezve chero chazvo. Saka ita shuwa kunamatira kusvika kumagumo. Zvino, tisingatambise imwe nguva, ngatinyurei tichinyura mune iyi nyaya. Ramba uchiverenga.
2. Ngamera KameraKamera
5. Kutsvaga kweJungle
Pazasi pezvataurwa pane iwo mashanu akanakisa Amazon Mutengo Tracker maturusi e2021 iwe aunogona kuwana kunze uko pane internet sezvazvino. Verenga pamwe kuti uwane rumwe ruzivo rwakadzama nezveumwe neumwe wavo.
komputa yangu pane desktop windows 10
Chekutanga pane zvese, yekutanga Amazon mutengo tracker chishandiso cha2021 chandiri kuzotaura newe nezvacho chinonzi Keepa. Iyo ndeimwe yeanonyanyo kudiwa Amazon mutengo tracker maturusi iwe aunogona kuwana kunze uko pane internet sezvazvino. Chinhu chakasarudzika cheichi chishandiso ndechekuti inouya yakatakurwa neakawanda akasiyana epamusoro maficha ari pasi pechigadzirwa chinyorwa paAmazon.
Pamusoro peizvozvo, chishandiso chinopawo mushandisi girafu inopindirana iyo yakaitwa ne-yakadzika pamwe nemisiyano yakati wandei. Kwete izvozvo chete, kana iwe uchifunga kuti iyo chati haina zvimwe zvinhu, saka zvinokwanisika kuti iwe uwedzere kana imwezve nhamba yezvakasiyana muzvirongwa zvekusarudza pasina kunetseka kukuru kana nesimba rakawanda pane rako.
Pamwe chete neizvozvo, vashandisi vanogona zvakare kuenzanisa zvinyorwa kubva kune ese maAmazon mitengo yepasi rose. Chishandiso chinouyawo chakatakura zvinhu zvakaita sekumisikidza iyo Facebook, email, Teregiramu, uye zvimwe zvakawanda. Iwe unogona zvakare kusarudza yemutengo wekudonha ziviso.
Uri kungotarisa pahwindo panguva ino? Ipapo zvese zvaunoda kuti uite ingo shanyira iyo 'Deals' chikamu. Mutengo tracker chishandiso unounganidza mamirioni ezvigadzirwa zvinyorwa kubva kuAmazon uye inouya nezvakanakisa madhiri pane akati wandei akasiyana mapoka iwe aunosarudza kubva.
Mutengo we tracker chishandiso unoshanda mushe mushe pamwe neese anozivikanwa pamwe neanonyanya kudiwa mabhurawuza ekuwedzera akadai seGoogle Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Edge, uye zvimwe zvakawanda. Pamusoro peizvozvo, misika yeAmazon inowirirana ne .com, .in, .au, .ca, .uk, .mx, .br, .jp, .it, .de, .fr, uye .es.
windows 10 icon yangu yekombuta
Chimwe chakanakisa Amazon mutengo tracker chishandiso cha2021 chandichaenda kuzotaura newe nezvazvino chinonzi Camel CamelCamel. Kunyangwe iine zita risinganzwisisike, chishandiso chemutengo chinonyanya kukosha nguva yako pamwe nekutarisisa. Chishandiso chinoita basa rakakura rekutevera mitengo yeAmazon zvigadzirwa zvinyorwa. Pamusoro peizvozvo, inotumirawo zvinyorwa izvi zvakananga mubhokisi retsamba rako. Iyo yekuwedzera-yeyebrowser inonzi Camelizer. Iyo yekuwedzera-inowirirana neanenge ese anozivikanwa pamwe neanonyanya kudiwa mabhurawuza ekuwedzera akadai seGoogle Chrome, Mozilla Firefox, Safari, uye zvimwe zvakawanda.
Maitiro ebasa remutengo we tracker chishandiso zvakada kufanana neya Keepa. Pane chishandiso ichi, unogona kutsvaga chero chigadzirwa chauri kutsvaga. Seimwe nzira yekushandisa, unogona kushandisa bhurawuza rekuwedzera-rekutarisa iwo mafaera enhoroondo yemutengo iwe auri kuzowana pane iro peji rezvigadzirwa pacharo. Pamusoro peizvozvo, iwe unogona zvakare kusarudza iyo yekuzivisa yeTwitter kana paine kudonha kwemutengo pane chigadzirwa chauri kutarisa kwenguva yakareba ikozvino. Icho chimiro chinonzi iyo Camel Concierge Service.
Zvimwe zvezvimwe zvinoshamisa zvinosanganisira sefa nechikamu, kugona kutsvaga zvigadzirwa nekupinda muAmazon URL yakananga mubhawa rekutsvaga, Amazon locales, wishlist sync, uye zvimwe zvakawanda. Nekudaro, hapana firita inoenderana nemutengo pamwe neyakaenzana chikamu. Iyo tengo tracker chishandiso inoita kuti iwe ugone kuona epamusoro pamwe neepasi mitengo zvakasiyana zvakasiyana mutsvuku uye girini mafonti. Nekuda kweizvozvo, iwe unogona nyore nyore kugadzira yako pfungwa nezve kana iwe uchifunga kuti ikozvino mutengo wakakodzera iwe kana kwete.
Kune mamwe mapfupi eichi chishandiso anowanikwa pane ese maAndroid pamwe ne iOS anoshanda masisitimu . Mutengo we tracker chishandiso unowanikwa munyika zhinji dzinosanganisira iyo US, UK, Italy, Spain, Japan, China, Germany, France, Canada, uye zvimwe zvakawanda.
discord yakanamatira pakuongorora mhinduro
Dhawunirodha Camel CamelCamel
Ini zvino ndinokumbira imi mese kuti mushandise tarisiro yenyu kuinotevera yakanakisa Amazon mutengo tracker chishandiso cha2021 icho iwe chaunogona kuwana kunze uko painternet sezvazvino. Iyo tengo tracker chishandiso inonzi Mutengo, uye inoita basa rayo fantastically mushe.
Iyo yekuwedzera inoshanda zvakanyanya mushe neanenge ese mabhurawuza akadai seGoogle Chrome, Mozilla Firefox, uye zvimwe zvakawanda. Iwe uchazowana zviziviso pane chaiwo zvigadzirwa kubva kuAmazon. Mukuwedzera kune izvo, iwe unogona kuchengeta ziso kunze kwemadonhwe emitengo mune ramangwana. Izvi, zvakare, zvinoita kuti uve nechokwadi chekuti unochengetedza zvakanyanya sezvinobvira iwe paunenge uchitenga. Icho chishandiso ndechimwe chinokurumidza-chaicho-nguva maAmazon mutengo ma trackers ayo anokuzivisa iwe nezve mutengo wekuchinja ese maawa gumi nesere futi.
Uyezve Verenga: Nzira yekushandisa DirectX Kuongorora Chishandiso mukati Windows 10
Zvese zvaunoda kuti uite kuti ushandise ndiko kuwedzera kuwedzerwa mubrowser yako. Kana izvo zvaitika, iwe unogona kungoenda kune chaiyo chigadzirwa peji raungade kutarisa mutengo we pawebhusaiti yeAmazon. Mushure meizvozvo, zvinokwanisika kuti iwe utange kuteedzera mutengo wechigadzirwa chakataurwa. Pangosvika kudonha kwemutengo, chishandiso chemutengo chinotumira kutumira chiziviso mubrowser rauri kushandisa. Pamusoro peizvozvo, iyo mutengo tracker chishandiso zvakare inoita kuti iwe ugone kugonesa kuti utarise ziso pamadonhwe emitengo mune ramangwana. Kwete izvozvo chete, nerubatsiro rweichi chishandiso, zvinokwanisika kuti iwe uongorore runyorwa rwezvigadzirwa zvauri kuteedzera chero nguva yakapihwa nekungopinda iyo inodonhedza menyu. Izvi, pasina kupokana, mukana wakakura kune vazhinji vevashandisi - kana zvisiri zvavo vese.
Zvino, rinotevera rakanakisa Amazon mutengo tracker chishandiso cha2021 chandiri kuzotaura newe nezvacho chinonzi Penny Parrot. Iyo yekutsvaga-yekutevera chishandiso inouya yakatakurwa izvo zviri nharo kuti yakanakisa mutengo wekudonhedza chati yeese maAmazon mutengo nhoroondo trackers ari kunze uko painternet sezvazvino.
Iyo tengo tracker chishandiso haina kugadzikana, yakarongedzwa, yakachena, uye ine mune yayo chitoro manhamba mashoma ezvimiro asi iwo akanyanya kukosha. Iyo yekushandisa interface (UI) ndeye minimalistic, yakachena, uye iri nyore kushandisa. Chero ani ane ruzivo rudiki rwehunyanzvi kana chero munhu ari kutanga kushandisa chishandiso ichi anogona kuchibata pasina kunetsa kukuru kana nesimba rakawanda kwavari. Izvi zvirokwazvo mukana wakakura kune vese vashandisi. Iwo maficha akanyorwa nenzira inoonekwa pamwe nekushinga. Iko zvakare kune ipfupiso yevashandisi ve iPhone kwavanogona kuona zviri nyore nhoroondo yemutengo wechimwe chigadzirwa paAmazon.
Padivi pezvikanganiso, mutengo wekushandisa mutengo unoenderana chete newebsite yekambani yeUSA, iri Amazon.com. Pamusoro peizvozvo, newewo uchafanirwa kusaina kuti ushandise yemahara Amazon mutengo tracker chishandiso.
Mutengo tracker chishandiso inotsigira dzinenge dzese dzakanyanya kuwanda mabhurawuza akadai seGoogle Chrome, Internet Edge, Opera, Mozilla Firefox, uye zvimwe zvakawanda. Nekudaro, zvinongopindirana neAmazon.com ndiyo webhusaiti yeUSA yekambani.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, chekupedzisira chakanakisa Amazon mutengo tracker chishandiso cha2021 chandiri kuzotaura newe chinonzi Jungle Kutsvaga. Iri zita rakaringana kufunga sango hombe rezvigadzirwa zvinowanikwa paAmazon. Maitiro ebasa remutengo we tracker chishandiso chiri nyore, kwaunogona kuenda kuAmazon nekungorova bhatani rekupinda.
Uyezve Verenga: 10 Yakanakisa Yemahara Antivirus Software yeApple
Nerubatsiro rweiyi mutengo tracker chishandiso, unogona kutsvaga chero chigadzirwa iwe chaunoda zvichienderana nechikamu chayo pamwe nekushandisa iri nyore fomu yekutsvaga. Zvese zvaunoda kuti uite kuti ushandise fomu rekutsvaga kuisa zita rechigadzirwa, hushoma pamwe nemutengo wepamusoro, zita rekambani inogadzira chigadzirwa, kuongororwa kwevatengi, uye zvishoma pamwe neepesenti yakawanda kubva.
Ukangowirirana nekutsvaga, iyo webhusaiti yeAmazon inozovhura pane nyowani pamwe neyega tebhu uko zvigadzirwa zvinozoratidzwa sezvinoenderana nenzira yekutsvaga iwe yawakapa. Iko hakuna browser rekuwedzera-rinowanikwa kune ino Amazon mutengo tracker chishandiso zvakare.
chimiro chekuvandudza kune windows 10, vhezheni 1703 - kukanganisa 0x80070020
Dhawunirodha Jungle Kutsvaga
Saka, varume, tasvika kumagumo echinyorwa. Ino yave nguva yekuiputira. Ini ndinovimba zvechokwadi kuti chinyorwa chakapihwa iyo inodikanwa-kukosha iwe wanga uchishuwira uye kuti yainge yakakodzera nguva yako nekutarisirwa. Izvozvi zvawave neruzivo rwakanakisisa ita chokwadi chekuisa kune yakanakisa mashandisiro aungawana. Kana iwe uine mubvunzo chaiwo mupfungwa dzangu, kana kana iwe uchifunga kuti ndarasa imwe pfungwa, kana iwe uchida kuti nditaure nezve chimwe chinhu zvachose, ndokumbira undizivise. Ndingafarire kukunda kubvuma kune zvako zvikumbiro pamwe nekupindura mibvunzo yako.
Bluetooth sarudzo yakanyangarika windows 10
peer zita resolution resolution sevhisi
windows kugadzirisa keyboard haishande
windows 10 kugadzirisa kunoramba kuchidzoka
reset uye rejista zvakare windows kugadzirisa zvinhu
windows 10 bvisa mafaera echinguvana asiri kushanda